Igbo, Tracts, UZI NKE 11 -- Gi onwe-gi atula egwu: n'ihi na ab͕aputawom gi, akpọwom gi n'aha; ị bụ nke m! | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 11 (Do not be afraid, for I have redeemed you, I have called you by name; you are Mine!)
UZI NKE 11 - Soro M! ( Matiu 9:9)
Onye ọ bụla nke na-efega mba dị anya na ụgbọ elu a ma ama nwere ike ịhụ, mgbe ọ na-asọda, obere obere ụgbọ ala na-agba ọsọ ụgbọelu ma dọba ya n'ihu. Ọ na-eji nwayọ aga n'ebe ebe ndị njem ahụ nọ. N'elu ụlọ obere ụgbọala a, ịga-ahụ nnukwu ihe ịrịba ama nke edere nnukwu akwụkwọ ozi, "SORO M."
Nwoke nke malitere okwu a, "Soro m," afọ 2,000 gara aga bụ Kraịst, nwa Meri. Ọ si n'ugwu Nazaret rute na ndagwurugwu miri emi nke Osimiri Jọdan rue ogbe Tiberias. Kraịst biri na Kapanaum, ebe ebe ọtụtụ ụzọ si agafe. N'ebe ahụ ka Ọ gwọrọ ndị ọrịa niile bịakwutere Ya. O kporo ndimmehie ka ha chègharia site n'omumeo jooha, wee kpugheere ha Ozioma nke nkasi obi. Ndị obi gbawara agbawa na ndị nwere nkwarụ bịakwutere Ya site n'ebe nile. Onye ọ bụla chọrọ ịmata eziokwu sitere na nso ma dị anya. Ha nile chọrọ ịhụ nwoke a pụrụ iche nke nwere ike ịrụ ọrụ ebube dị ịtụnanya. Ha chọtara ike Chineke, nduzi na obi iru ala n'okwu Ya.
N'akụkụ a, otu onye ọnaụtụ aha ya bụ Matiu nọ na-ebi ndụ. Ọ bụ onye ọchịchị maka ike ọchịchị Rom. Ọ chịkọtara ụtụ isi ndị omenala maka ndị Rom site na ndị njem na site na onye ọ bụla na-ebu ngwaahịa ahịa. Ndi Juu nke ya kpo ro Ya asi maka inyere ndi Rom aka, ha we kpo kwa ya asi n'ihi na o were ottego dika o cho ron'aka ha. Ọ maara aghụghọ nke ndị njem ma kpughee ebe nzuzo nke ngwaahịa ndị ahịa ahụ ma mee ka ha kwụọ ụgwọ omenala. Ọ dịghị onye nwere mmasị ịkwụ ụgwọ ụgwọ omenala, mana Matiu bụ onye maara ihe, nweekwa ike inweta ọtụtụ ego n'ihi ahụmahụ ya nwere ezi uche.
Otú ọ dị, ọrụ ndị a na-eme omenala na-ata ahụhụ site n'aka ndị ya jụrụ n'agbanyeghị akụ na ụba o nwetara. Akọnuche ya metụrụ ya aka, ọ chọkwara ịchọta mgbaghara maka uru aghụghọ ya ma hapụ ya maka ego ya. Ọ chọsiri ike imeri ndị kpọrọ ya asị ma chọsie ike ime udo na obi dị ọcha.
Mgbe ọ nụchara banyere Jizọs, bụ onye biri n'obodo ya, ọ chọrọ ka ọ hụ Ya ngwa ngwa, na-enwe olileanya inweta enyemaka site na Ya. Matthew na-achọ udo na Chineke na ndị mmadụ, mana dịka onye isi, ọ pụghị ịga n'ihu na nwoke a na-adọrọ mmasị nke Nazaret. Otú ọ dị, ihe ọ nụrụ site n'okwu Jizọs na ihe Ọ na-eme, kere n'ime ya olileanya na ọchịchọ ịhụ Ya na izute Ya naanị.
Kraist nwere ike ịhụ ma gụọ echiche nke obi. Enye ama okụt akwa udọn ke esịt ofụri edinam emi, onyụn okụt ke enye ama ọtọnọ ndinyịme Enye. Otu ụbọchị ka Ọ gafere site na ụlọ ọrụ ndozi, Ọ hụrụ Matthew ka ọ na-elegide Ya anya. Jizos nyochaa obi ya, hu ncheghari, ma nye ya iwu dika "Sooro m!"
Onye ọrụ omenala a tụrụ anya na ogologo oge gara aga ka ọ nụ okwu sitere na Chineke maka ya. Ntre ke ini enye ọkọbọde utom Kraist, enye ama ọfiọk ete ke enye ama akabade enye ọsọsọp onyụn aka iso owo emi osio Nazareth. Site na iwu Ya, Matthew nwere ike ịhụ na Onye amụma a elelịghị ya kama ọ dị njikere ịnakwere ya n'ime mmekọrịta nke ndị na-eso ụzọ ya n'agbanyeghị na ndị obodo niile jụrụ ya. Echiche a gbara ya n'isi na obi dị ka àmụmà. Ọ ghọtara na njiri anya nke na ọ ghaghị ime ugbu a ma ọ bụ mgbe ọ bụla. Nke abụ ohere nke ndụ m, ọ chere. N'ihi ya, Matiu biliri ozugbo ma gbanwee ụlọ ọrụ ahụ gaa n'aka onye ọrụ ọzọ ma soro Jizọs n'azụ.
O juru ìgwè mmadụ ahụ soro Kraịst anya. Ha achọghị eziokwu ahụ na Onye Ọgwọ Ọgwọ Ukwu nakweere onye nchụso a. Ya mere, Jizos mere ka ndi neso uzo ya mara ihe oputara iso Ya ma gwa ha nkpughe nka:
"Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, buru obe ya ma soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi Mụ ga-achọta ya." (Matiu 16:24-25)
Jizos na akowa ndi neso uzo Ya okwu ndia, ihe omimi asaa nke ayi nile kwesiri ima ma mata:
Eziomume nke ichicho: Jizos naakota mmad niile choroibà n'alaeze Chineke. Mana Ya, site n'onwe ya, agaghi akppo mmadu nile ka ha soro Ya oge zuru oke, ma e wezụga ndi kpebiri onwe ha ime otua. Onye choro ezi omume nke Chineke ma di njikere ibu ihe isi ike nke bia na isoro Jizos, ya onwe ya bu onye Jehova ghoro.
Na-ajụ Onwe Gị na Ịdị Ndụ Nye Jizọs: Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya site ná mmalite na ha aghaghị ịhapụ ndụ onwe ha. Ha ekwesịghị iche na ha dị mkpa karịa ndị ọzọ. Ha ekwesighi ikweta onwunwa nke ndu, ha ekwesighi ka obi ha na uche ha dakwasi nsogbu ndi ozo n'uwa a. Ha ga-ahapụ ikike ha n'ihi Jizọs. Ya mere, onye ọ bụla na-eso Nwa Atụrụ Chineke agaghị achọ ịkwalite onwe ya kama ọ ga-agọnahụ onwe ya ma hụ ma na-ejere Nwa Atụrụ Chineke ozi ma na-ejere ya ozi. Jizos choro ka anyi nwere onwe anyi site n 'zonke anyi ka anyi wee ghara idi ndiji mezuoo chichonke onwe anyi, kama anyi bia Jizos
Na-enyocha Onwe Gị ma Chegharịa: Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ Ya na ha ekwesịghị iche na ha bụ ndị ezi omume ma ha ekwesịghị ịnwa ime onwe ha ihe ziri ezi. Kama nke ahụ: ha ga-enyocha onwe ha n'ihu Chineke, na-aghọta na onye ọ bụla, dị ka ọdịdị ya, dị njọ ma gbajie agbagọ ma kwesị ka a kpọgide ya n'obe. Jizos agwagh ayi ka ayi buru obe ya, kama ka ayi buru obe. Nke a pụtara na onye ọ bụla mmehie kwesịrị ikpe onwe ya dị ka ịdị nsọ nke Chineke ma chegharịa. Okwuputara nmehie ya nye Onyenwe anyi wee nwua n'ebube nke ebube, ugwu na ama. Apostle Paul ama okohoete, "Enye ke eto ye Christ; ma ọ bụghịzi m dị ndụ, ma Kraịst bi n'ime m." (Ndị Galetia 2:20)
Nwee ka Jizos: Onye obula n'eso Jisos gege olu Ya n'olu ozioma ma ghota Ya site n'okwukwe. A gaeme ka ya na oyiyi ya. Onye naeso Jizos ga-amata njirimara nke Onyenwe ya ma ghota uzo ya karia, n'inwe ike oma ya. Ya mere, onye na-eso Jizọs bụ onye tụkwasịrị Ya obi ga-agbanwe ya na foto nke Onye Nzọpụta ya. Ọ na-amụta ihe ịhụnanya nke Chineke, ọṅụ nke Kraịst na udo nke Mmụọ Nsọ pụtara. Ọ mụtara inwe ndidi ma hụ ndị iro ya n'anya dịka ikwesị ntụkwasị obi na obiọma nke Kraist na-anọ n'ime ya. Ọ ga-amụta igosipụta ịdị nwayọọ, ịdị umeala n'obi na njide onwe onye Jizọs.
Gwa Ndio zo nke Jizos: Kraist kpo ro ndi neso Ya ka ha wee jee ozioma nime ógbè ha. Ha ga agba akaebe nye ndi mmadu ihe nile ha huru nime Ya na ihe nile na - eto nime ndu ha site na nkpuru nke Mo Nso. Onye ọ bụla nke kwupụtara Jizọs nyere ndụ ndị na-ege ntị ndụ ebighi ebi. Nzube bụ isi nke Kraịst abụghị ịgbanwe ọnọdụ ndị mmadụ; Ọ chọrọ ịmepụta ndị ọhụrụ, na-eme ka ike Ya zuru oke n'adịghị ike ha. Ọ na-eme nke a site na ndụ na okwu ndị àmà ya. Jizos cho roimezu nzube Ya site n'aka ndi neso Ya. Ọ bụrụ na ha anọgide na Ya dịka alaka ụlọ ọrụ na-anọgide na osisi vaịn ahụ, ha ga-amị mkpụrụ.
Mkpagbu Ga-abịa: Onye ọ bụla nke na-anata amara nke ezi omume Kraịst, ndụ ebighị ebi ya ga-ebi n'ime ya site na obibi nke Mmụọ Nsọ. Ọtụtụ mgbe, ọ ga-aghọ ọbịbịa n'ụwa a. Ndị enyi ga-akwa ya emo ma jụ ya. Ha nwere ike ịgha ụgha banyere ya ma kpọọ ya asị. Dịka o mere Jizọs, ọ ga-ekwe omume na ọ ga-eme ndị na-eso ụzọ Ya. Mmụọ nke ụwa a na-akpọ Mọ nke Chineke asị ma na-alụ ọgụ ma na-emegide Ya. Ma ịhụnanya nke Kraist na ngọzi Ya dị ike karịa nkọcha nke ụwa. Apostle Paul ama efehe ke obio eken ke obio man akahade akpa ony u'n aka iso ndinam Obon esie.
Akpadoro Kraist nye ndi kwere ekwe: emere ka Kraist si n'onwu bilie mgbe O nwusiri n'obe ma merie onwu. E buliri ya elu n'eluigwe, ma ọga abịaghachi ịchịkọta ndị naeso ụzọ Ya ma weregara ha na Nna Ya nọ n'eluigwe. Kraist ga adọta ndi oru Ya kwesiri ntukwasi obi n'azu ya ka ha we buru ebe O no. Ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi ya bụ ihe na-emesi obi ike maka ọdịnihu ha. Ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs pụtara na Ọ ga eme ka anyị nwere onwe anyị pụọ na nmehie site n'ọnwụ ọnwụ ya ma mee ka anyị bụrụ ndị ezi omume n'ụbọchị ikpé. Ọ na edozi àgwà anyị site n'igosi onwe Ya nye anyị n'ọgbụgba ndụ ebighi ebi. Ọ na-ejide anyị na ndidi, na-enyere anyị aka imeri ọnwụnwa nke ndụ a, na ebube Ya nke eluigwe.
Matiu, bụ onye na ezisa ozi ọma, nwere nzọụkwụ ndị a dị iche iche n'ịgbaso Kraịst. O gho tara iwu nke Jizos nime iwu Ya, debe ha n'obi ya ma dee ha niile. (Gụọ Matiu 5:1 - 7:29) Ndịozi ndị ọzọ họpụtara ya ka ọ kpọkọta ma chebe okwu Kraịst (Luk 1:2). O dere ihe kachasị n'akụkọ banyere Oziọma ndị ahụ. O deeghị echiche nke aka ya ma detuo Jizọs n'okwu, omume na ekpere ya. A nabatara na Matiu bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi nye Nna ya hụrụ n'anya. Anyi na-aguta na nkpughe nke Kraist nye Jon na Matiu gabu otu nkume di omimi di elu maka Jerusalem ohuru n'elu igwe (Nkpughe 21:14, 19-20).
Matiu hapụrụ ọrụ ya na akụnụba ya n'ihi ịgbaso Jizọs. Ijeghari na Jisos abughi ihe di mfe, ma o muta inwe obi uto dika ihe nenye ya nye ya kwa ubochi. Ọ bụbu onye nduzi omenala ma nwee ike ịchịkwa mmadụ; Otú ọ dị, na-eso Jizọs, ọ ghaghị ịtachi obi ịkpọasị nke ndị na-asọpụrụ Chineke bụ ndị jụrụ Christ. Ya na ndi ozo ndi ozo gbaghariri n'abali mgbe ejidere ya ikpe.
Matiu bu onye isi ochichi nke nwere onwe ya. Mana site na isoro Jizos, o ghaghi imuta nrubeisi na ido onwe ya n'okpuru. Matiu hapụrụ nchebe elu ala ya ma mụta inwe afọ ojuju na nlekọta nke Onyenwe ya. Ọ hapụrụ owu ọmụma ya ka ọ ghara ịbụ onye a na-asọpụrụ maka ọrụ ya na ndị Rom, ma banye n'ime mkpakọrịta nke ndị na-eso ụzọ Jizọs. Kraist weputara ya na nmehie ya wee webata ya n'idi nke Ya. Onyenwe anyi zoputara ya site n'ikpé nke akọ na uche ya ka o wee nwee ike idi n'udo na Chineke na ndimmad. Matiu gbapuru iche nke ụwa a site n'ike nke Mmụọ Nsọ site n'ịhụ Chineke n'anya, Ọkpara Ya na ndị na-eso ụzọ Ya.
Jizọs nyere Matiu iwu, sị: "Soro M!" Ọ gwaghị ya ka o soro onye ọkà ihe ọmụma ma ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma gwa ya ka o soro Okwu Chineke nke mmadụ. Naanị Jizọs bụ nkwa maka ọdịnihu ya na ihe ịga nke ọma ya. Ya mere, Onyenwe anyị ghọrọ Matiu Onye Na-agwọ Ọgwọ, Onye Na-edozi Onwe Ya, Onye Nnapụta, Onye Mgbapụta na isi iyi nke ike na ndụ. Jizọs bụ Onye Nzọpụta Jizọs. Nwa Atụrụ Chineke nwụrụ dịka ihe nnọchiteanya Matiu na ikpe. Ya mere, Matiu kweere na Ya ma kwupụta na edere ya na okwu Pita, "Ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ." (Matiu 16:16)
Ị na-achọsi Chineke ike n'eziokwu? Ị chọrọ, ị kpebiela ịdị n'udo na Onye Okike gị na Nna gị nke eluigwe? Ị chọrọ ịmatakwu banyere Jizọs ma bie n'ime Ya n'ụbọchị dị mma na n'ụbọchị ọjọọ? Na enyocha onwe gị; ọ bụrụ na ị nụ ka Jizọs na-akpọ gị na okwu Ọ gwara Matiu, "Soro M," ị ghaghị ime mkpebi. Cheta nnukwu ụgbọelu na-eso obere ụgbọ ala na ọdụ ụgbọ elu, nke ga eduzi ya gaa ebe kwesịrị ekwesị. N'otu aka ahụ, Jizọs na akpọ gị ka ị soro Ya n'ajọ na mmehie gaa ebe ị ga aga: Chineke, onye bụ nzube maka ndụ gị. Soro Kraịst na ị ga-aghọ onye ọhụrụ na ọṅụ na eju afọ, ịga eso ndị ọzọ kerịta ọṅụ gị. Anyị dị njikere iji zitere gị akwụkwọ ọgụgụ mmụọ ndị ọzọ n'efu ma ọ bụrụ na ịrịọ maka ya.
Page last modified on October 01, 2018, at 03:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)